किसान क्रेडिट कार्ड : यस्ता छन् फाइदा - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
किसान क्रेडिट कार्ड : यस्ता छन् फाइदा
काठमाडाैं, साउन ७ : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को मौद्रिक नीतिमा किसान क्रेडिट कार्डको विषय उठान गरेको छ । बिशेष गरी किसानले पाउने ऋण र अनुदानसँग सम्बन्धित यस कार्ड चाडै प्रयाृगमा ल्याउने गृहकार्यमा कृषि विकास बैंक छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल राष्ट्रबैंकको सर्कुलरको प्रतिक्षामा बैंक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी २/४ दिनमै सर्कुलर जारी गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार कसरी कार्यान्वयनमा जाने भन्ने विषय केन्द्रिय बैंक र कृषि विकास बैंक मिलेर टुंगो लगाउनेछन् ।
कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय दसैँ अगाडी कार्ड जारी गरिने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी दसैँ अगाडी नै जारी गरिसक्छौँ । यसलाई तीन चरणमा गरेर जारी गर्छौँ, पूर्णतया कार्यान्वयनमा आउन करिब ५ महिना लाग्नेछ ।’ किसान क्रेडिट कार्ड के हो ? यसले किसानको हितमा कसरी काम गर्छ ? भन्ने आम चासोलाई सम्बोधन गर्न हामीले राष्ट्र बैंक र जारी गर्ने कृषि विकास बैंकसँगसँग कुराकानी गरेर बुझाउँन खोजेका छौ ।
किसान क्रेडिट कार्डले यसरी गर्नेछ काम
मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ८३ मा किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यो कार्ड कृषि विकास बैंकले जारी गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकको मागपछि किसान क्रेडिट कार्ड सो बैंकमार्फत जारी गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको हो ।
किसानले लिएको ऋणको र अनुदानको सम्बन्ध कर्जासँग जोडिएको हुन्छ । एउटा नगद भुक्तानी र अर्को बिल भुक्तानी हुन्छ । कृषि सामाग्री, मल खाध, मेसिनरी बिक्री गर्ने सप्लायर्स कृषि बिकास बैंकको मर्चेन्ट (एजेन्ट) हुन्छ । उनीहरूले कार्डमा क्युआर कोड राखिएको हुन्छ सो क्युआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी लिनसक्छन् । यो मोबाइल सिस्टमबाट कार्डको क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी हुनेछ । कार्डको पहुँच हुने मोवाइल एप्लिकेसन विकास कृषि विकास बैंकले गर्छ । सो एपमार्फत स्क्यान गरेर भुक्तानी हुन्छ ।
सो कार्ड लिनका लागि कृषि विकास बैंकमा खाता खोलेको हुनुपर्नेछ । किसानले सो खातामा राखेको रकम अनुसार त्यसको निश्चित सीमासम्म बैंकले ऋण प्रदान गर्नेछ । यदि राज्यले किसानलाई विभिन्न शीर्षकका सहुलिय दियो भने सो कार्डमा हालिदिन्छ । जस्तै किसानलाई राज्यले कर्जामा सहायता अथवा अनुदान दिनुपर्ने भयो भने, ब्याजमा अथवा साँवामा अनुदान दिनुपर्ने अवस्था आयो भने सो बैंकमा रकम हालिदिन्छ । कृषि कार्डमा किसानको ब्यालेन्स हुन्छ उसले बैंकमा कर्जाको ब्याज तिनुपर्यो भने त्यही क्रेडिट कार्ड घुसाएर तिर्न सक्छ ।
यो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरण गरी कार्यान्वयन हुनेछ । विस्तारै शुरु गर्ने, मर्चेन्ट बनाउने, प्रयोग गर्न सिकाउने, कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने र सफल नभएको अवस्था आयो भने पुनः सिकाउने पक्षमा कृषि विकास बैंक छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीका अनुसार बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्ने मिति कहिले हो सो को जानकारी पनि सो कार्डमा हुनेछ ।